Siyaasiga Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur oo Ankara kula kulmay Madaxweynhii hore ee Dalka – Banaadir Times
By banaadir 28th July 2018 161 No comment
Siyaasiga Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur oo waayadaanba Dibad joog ka ahaa Dalka ayaa waxa uu hooygiisa ku booqday Madaxweynihii hore ee Dalka Mudane Xasan Shiikh Maxamuud.
C/Raxmaan Cabdi shakuur ayaa Bartisa Facebooka soo dhigay sawirrada kulanka uu la qaatay Ex Madaxweyne Xasan Shiikh isagona soo raaciyay Qoraalkaa “Waxaan booqasho ugu tegey Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamud. Waxaan ka wada hadalnay xaalada dalku marayo iyo sida ugu haboon ee mustaqbalka lagu wajihi karo. Kulankeena wuxuu ku soo idlaaday isfaham iyo iskaashi”.
Kulanka Ina Cabdi shakuur iyo Xasan Shiikh ayaa dad badan waxa ay u arkaan in uu weji cusub u yeelaayo kacdoonka mucaaraddeed ee ka dhanka ah dowladda farmaajo oo cabdi raxmaan shakuur hormuudka u yahay.
Ciidamada Puntland oo howlgal fuliyay.